အာရှတလွှား | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 148
ကမာပုလဲ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ ည … ညတွေမှာ ပုတ်ပုတ်နှိုးတတ်တဲ့ သောကလှိုင်းတံပိုးတွေ …။ပင့်ကူအိမ် လမ်းမများ မှိုင်းဝနေတဲ့ မဟူရာမျက်နှာကျက်များ ပိုက်ကွန်မှာ … ၀မ်းစာကျပျောက်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်များစွာ …။ ဒဏ်ရာတွေ ထည်လဲနဲ့ နေသားကျခဲ့ပြီပေါ့ … ဟုတ်စ …။ လှေကွဲကြီးကို ထားရစ်ခဲ့ … ပင်လယ်ဟာ လက်ပြကျန်ခဲ့ပေါ့ မငြှိမ်းဘဲ … သူ့သဘောနဲ့သူ ငြိမ်း ဆီခန်း မီးစာကုန် အမှတ်တရများ …။ ကြမ်းဟာ သမန်းဆီလိမ်းကျံလို့ ရေငတ်တယ် ဖေဖေ့ရဲ့မိသားစု ဖေါင်ကူးတို့ပေါ်မှာ … ။ ။ No tags for this post. Related posts No related...
စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့အတူ စိုးရိမ်နေရတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တူမောင်ညို ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး” ဒီအကြောင်းတွေ ကြားရတဲ့အခါ ဖတ်ရတဲ့ အခါ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့အတူ စိုးရိမ်စိတ်လည်း တွဲပြီးပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားမှုကို အထွေအထူးရှင်းပြစရာမလိုပေမဲ့၊ စိတ်ဝင်စားမှုအတူ ယှဉ်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိုးရိမ်မှုကိုတော့ ရှင်းပြရမယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ဒီလိုပါ၊ ဒီကိစ္စတွေဟာ ကိစ္စကြီးတွေဖြစ်နေလို့တင် စိုးရိမ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အုပ်စိုးသူအစိုးရအဆက်ဆက် မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စကြီးတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ကိစ္စကြီးတွေကို လက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရကရော ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလား။ ဒါ့အပြင်လွှတ်တော်ထဲမှာ အနည်းစုဖြစ်တဲ့ ဒီချုပ်အမတ်တွေကရော အများစုဖြစ်တဲ့ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုစည်းရုံးပြီး ဒီကိစ္စကြီး တွေကို ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလား။ ဒီကိစ္စကြီးတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရတာကလည်း “ရေမှာအရုပ်ရေးပြ” ရတာနဲ့ တူနေလိမ့် မယ်လို့ထင်ပါတယ်။...
မှုန်ရွှေရည် … ကိုဝင်းဦးနဲ့ ဂန္ထ၀င်ကိစ္စတွေအကြောင်း
ကမာပုလဲ အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂ ဒီမှာကိုပါကြီး ကျနော်ပဲ သေသေ … ခင်ဗျားပဲသေသေ … သေတာအရေးမကြီးဘူးဗျ …။ အရေးကြီးတာက ကျနော်တို့ရဲ့အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေရပ်မသွားဖို့ အရေးကြီးတယ် … မနေ့ညက ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကနေ “မှုန်ရွှေရည်” ဇာတ်ကားကို ပြန်ကြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ လူက ဇာတိ … အိမ် .. ငယ်ဘ၀ကို ပြန် ရောက်သွားတယ်။ အိမ်ကအမတွေက ၀င်းဦးခရေဇီတွေ …။ အကြီးဆုံးအမက အသည်းဆုံး။ အမကြီးက သူတို့လင်မယားအိပ်ခန်းရဲ့ ကု တင်ခြေရင်းမှာ ကိုဝင်းဦးရဲ့ နှစ်စဉ် အကောင်းဆုံးပြက္ခဒိန်ကို ၀ယ်ပြီးကပ်ထားတာ … ။ တနေ့ အမတို့အိမ်ဘေးက ရုပ်ရှင်ကန်ထရိုက်အိမ်ကို ဦးကျောက်လုံးလာလည်တယ်။ တညမှာ အမတို့အိမ်က နံရံကိုလက်သီးနဲ့ထိုးနေပုံကို ညကြီးသန်းကောင် ဦးကျောက်လုံး...
ဖိုးထက် အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂ ပြောရအုံးမယ်။ ကျနော် ဗုဒ္ဓဘာသာဗျာ။ ဒီတော့ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့သိတယ်။ ငရဲပြည်သိတယ်။ နတ်ပြည်သိတယ်။ ပြီးတော့ ယမမင်းကြီးနဲ့ သိကြားမင်းကြီးကို သိတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ထဲကမှ ယောယုဝမင်းကြီးကို ကျနော့်အတွက် ပိုပြီးသိသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ လူကြီးရဲ့ ဘိုင်အိုဂရပ်ဖ်ဖီကိုသိထားရင် ဘယ်လိုဖားရ၊ ကပ်ရ၊ ပေါင်းစားရမယ်ဆိုတာသိနေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးဆိုတော့ သူ့အကြောင်းဘဲ အလေးထား မိတယ်။ ဦးမာဃဆိုတဲ့ သိကြားမင်းကိုတော့ ကိုယ်နဲ့ အဆင့်အတန်းမတူဘူးလို့ သတ်မှတ်ဖြစ်တယ်။ အဆင့်မတူဘူးဆိုတာ ကိုယ့်လားရာ ကိုယ်သိနေတဲ့လူမို့လို့ ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့လူအကြောင်း မလေ့လာဖြစ်တဲ့သဘောပါ။ နောက်..သိကြားမင်းကို ပါဆယ်နယ်လ်အရ ဂျေဝင်တယ် ပြောရမလားမသိ။ ဘယ်ဗျာ တဖက် နတ်သမီးငါးရာနဲ့ဆိုတော့ ဒီလူကြီးက လွန် တယ်ဗျ။ ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှမလုပ်ဘဲ ခိုးလို့ရတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ သိကြားမင်းလိုစည်းစိမ်ယူနေတဲ့ လူအရှင်လတ်လတ်ကြီးတွေ ရှိနေမှန်း...
ကမာပုလဲ အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂ ကိုယ့်ရင်ဘတ်တောင် စွယ်တော်ရွက်လို နှစ်မွှာချိတ်ဆက်ထားရသေးတာ တဖက်နဲ့ တဖက် မေ့မယ်ကြံရင် ပြန်ပြန် ငဲ့ကြည့်နေရတာမျိုး … ။ စိတ်မချလို့ မဟုတ်ပါဘူး ဒဏ်ရာနဲ့ စားနေကျ ၀မ်းစာ ချစ်သူနဲ့ မုန်းသူ အလွမ်းနဲ့ ဥပေက္ခာ တလှေတည်း စီးခဲ့ကြပေမဲ့ လမ်းခွဲသွားတဲ့ လားရာကိုယ်စီများ …။ နီးခြင်းနဲ့ ဝေးခြင်းကို မျက်ဝန်းရဲ့ ကြည့်နိုင်စွမ်းနဲ့ တိုင်းတာလို့ ရနိုင်တာမျိုးမှမဟုတ်တာ … ပြည်သူကို သိချင်တယ် တိုင်းနိုင်ငံတွေ အကြောင်းကိုသိချင်တယ် ဘ၀ကို သိချင်တယ် အနုပညာကို သိချင်တယ် ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကို အသေအချာသိချင်တယ် …။ အမေက ညည မအိပ်ခင် စာတွေပဲ ဖတ်ခိုင်းခဲ့တယ် အဖေကတော့ မအိပ်ခင် တိတ်တိတ်ကလေး...
သူစိမ်းများ ကမာပုလဲ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ သူစိမ်းဆံလာမှုတွေထဲမှာ ကိုယ်ရှုရှိုက်နေရတဲ့ ရှင်သန်မှုအသက် လေ ကိုယ့်ကို သူစိမ်းဆံလာမှုဟာ ဆိုးတယ် …။ သူစိမ်းဆံလာမှုတွေထဲမှာ တောကြီးမျက်မည်းထဲက တဲအိမ်ငယ်ကလေး အခြေပျက် အနေပျက် ကိုယ့်ကို ချစ်ရဲ့နဲ့ ထွေးပိုက်ထားဖို့ ခက်လာတဲ့အရေးဟာ ဆိုးတယ် …။ သူစိမ်းဆံလာမှုတွေထဲမှာ တအိုးထဲ စား ကြမ်းတပြေးထဲ အိပ် တအိပ်မက်တည်း အတူတူ မက်ခဲ့တဲ့ဘ၀များ စည်းပျက်ဝါးပျက် ပြိုကွဲနေကြတာဟာ ဆိုးတယ် …။ သူစိမ်းဆံလာမှုတွေထဲမှာ ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ ပန်းများ ပရိယာယ် ဆံကေသာထက် ရနံ့ပျက် ပွဲတက်အခင်းအကျင်းတွေဟာ ဆိုးတယ် …။ သူစိမ်းဆံလာမှုတွေထဲမှာ တကိုယ်စာတောင်မရှိတဲ့ အကျဉ်းတိုက်ထဲ ရင်ကို ရင်ချင်း ချနင်းနေမှုတွေဟာ ဆိုးတယ် …။ သူစိမ်းဆံလာမှုတွေထဲမှာ...
ကမာပုလဲ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၂ ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု သမိုင်းရဲ့ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ သူဟာ … အမျိုးသားသူရဲကောင်း။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး စစ်စစ်အတွက် တိုးတက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ သူဟာ မှိုင်း၊ ဗန်းမော်တင်အောင်၊ ဒဂုန်တာရာတို့ရဲ့ ရဲဘော် …။ အလုပ်သမား လယ်သမား ပစ္စည်းမဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ တိုက်ပွဲဝင် တပ်ဦးမှာ သူက … လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးရဲ့ ကြယ်စင်အနီ။ သူ့ဘ၀ရဲ့ အစ … အလယ် … အဆုံး အဖိနှိပ်ခံလူထုဘက်မှ တိုက်ပွဲဝင် ရုပ်ပုံလွှာ …။ အဲဒီ ကြယ်စင်အနီကား တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကြီးမြတ်ဂုဏ်ယူစရာ ကျဆုံးခဲ့လေပြီ…။ သူ့ဘ၀ကို အတုယူ သူ့ရပ်တည်ချက်ကို ခံယူ သူပြသည့်လမ်း လွတ်မြောက်ရေးလမ်းကို တိုက်ရင်း...
ဦးသိန်းစိန် ပြောပြတဲ့ ဦးသိန်းစိန်အကြောင်း – Tu Maung Nyo
ဦးသိန်းစိန် ပြောပြတဲ့ ဦးသိန်းစိန်အကြောင်း တူမောင်ညို၊ အောက်တိုဘာ ၇၊ ၂၀၁၂ ဦးသိန်းစိန် ပြောပြတဲ့ ဦးသိန်းစိန် အကြောင်းကို တကယ်တမ်းသိရှိလိုတယ်ဆိုရင် အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ မေး/ဖြေ ၃ ခုကို လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ – The New York Times သတင်းစာပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် Mr.Bill Keller နဲ့ ဦးသိန်းစိန် မေး/ဖြေ – (ဘီဘီစီ) ဌာနမှူး ဒေါ်တင်ထားဆွေ နဲ့ ဦးသိန်းစိန် မေး/ဖြေ – ဘီဘီစီ Hardtalk နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် မေး/ဖြေ တဆင့်စကား၊တဆင့်နားနဲ့ကြားကြရတာမျိုးဆိုရင် ပြန်ပြောတဲ့သူက (သူ့ဆန္ဒနဲ့)လိုတိုး ပိုလျော့လုပ်တာတွေလည်း ပါချင်ပါနိုင် တာပေါ့။ အခုဟာကတော့ ဦးသိန်းစိန် ကိုယ်တိုင်...
Page 148 of 155«1...146147148149150...155»
တူမောင်ညို - ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ၌ “နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုသစ်” အမှန်တကယ်ရှိပါသလော
တူမောင်ညို ● “သံတမန်တွေ မျက်နှာအငယ်ရဆုံးကာလ” တဲ့
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● လယ်သမားတို့ညီညွတ်လျှင် စပါးဈေးကွက်တိုးချဲ့နိုင်မည် (အင်တာဗျူး)… https://t.co/xuPhA43ddK about9hours ago ReplyRetweetFavorite
မိုက်ခဲစိန် – သမ္မတထရန့်လက်အောက်မှာ အမေရိကန်ခင်ဗျာ အရူးကို လင်လုပ်ရသလို https://t.co/tG2AvBOTBo https://t.co/FyO81DKBZZ about 12 hours ago ReplyRetweetFavorite
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now ● ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ https://t.co/TugPveIht3 https://t.co/tBsewScZmI 11:43:34 AM May 24, 2018 ReplyRetweetFavorite